Igumbi lokugezela elizimele eliseduze kuzo zombili izikhumulo zezindiza zaseMumbai
376 okushiwo abanye
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Siddharth
Ikhaya elisanda kulungiswa, elinethezekile, elihlanzekile ngokungenabala khona kanye enhliziyweni yaseMumbai! Indawo yokuhlala ephephile kakhulu enokuxhumana okungenakuqhathaniswa kulo lonke idolobha. Igumbi libanzi, line-air-conditioning, futhi ligcwele ukukhanya kwemvelo. Ababungazi bakho, u-Sunita no-Ashok, bangabapheki abahle, futhi banobungane kakhulu. Empeleni baphakathi kwababungazi abaphambili base-India, futhi baveziwe nasemikhankasweni ye-Airbnb yenkundla yezokuxhumana.
Ikamelo lokulala elinethezekile elizokukhumbuza isikhala sakho emuva ekhaya :) Kukhona igumbi lokugezela elinamathiselwe (i-ensuite) kanye ne-airconditioner enamandla ukuze kube lula futhi ukhululeke.
Umbhede omkhulu ongangenkosi uhlalisa abantu ababili ngokukhululeka. Uma kukhona umuntu wesithathu, sinikeza umatilasi onethezekile, kanye nomcamelo namashidi, phansi.
Sikhethe kakhulu inhlanzeko, futhi sizokwenza konke ukuqinisekisa ukuthi ikhaya lakho elingekho-nasekhaya lihlanzekile futhi linephunga elimnandi :)
4.82 ·376 okushiwo abanye
4.82 · 376 okushiwo abanye
Iyindawo ethandekayo, ethule, yokuhlala. Kodwa futhi eduze kakhulu kuzo zonke izindawo zokudlela ezihamba phambili, amabha, amathilomu nezinye izindawo ezithakazelisayo kumhambi. I-Yoga Institute edumile, esingethe abenza i-yoga emhlabeni wonke, iqhele ngamamitha angu-200. Uma kubhekwa ukuba seduze kwesikhumulo sezindiza, omunye umsindo osuka ezindizeni ezisukayo ulindelekile, kodwa cishe zonke izihambeli zethu (njengoba ungase ubone kuzibuyekezo zethu) ziwuthola ungaphakathi kwemingcele ebekezeleleka.
Vele usazise noma yiluphi usizo oludingayo, futhi ukhululeke ukungishayela ukuze uthole izincomo ngezinto ongazenza edolobheni.
USiddharth Ungumbungazi ovelele